အဖိနှိပ်ခံမျက်ဝန်းက မျက်ရည်စများ | Ko Rohingya
ဒါကြောင့် ဒီနေ့၊ ငါဆုံးဖြတ်တယ်၊
This entry was posted on February 6, 2013, in ကဗျာ and tagged ကဗျာ, ချမ်းမြေ့, တရုတ်ကပြား, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သားသတ်သမား, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ငါ့နှလုံးသားတွေ တုန်ရီနေတယ်	ခေတ်ပညာတတ် မွတ်စလင်မ်တွေ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ →